आइतबार अप्रिल 25, 2021 |
आइतबार अप्रिल 25, 2021
विषय — मृत्यु को प्रोबेशन
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: एफिसी5: 14
““जाग, हे निदाएकाहरू हो! मृत्युबाट उठ अनि तिमीहरूमाथि ख्रीष्ट चम्कुनु हुनेछ।””
उत्तरदायी पढाइ: 1 करिंथकरांस 15: 50-54
54 यसैले यो शरीर जुन नष्ट हुन्छ त्यसले अविनाशी धारण गर्दछ। र यो शरीर जुन मरणशील छ त्यसले अमरता पहिरिन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धर्म शास्त्रको भनाई सत्य ठहरिनछः मृत्यु विजयमा निलिएको छ।
1. भजनसंग्रह 17 : 1 (हे यहोवा!), 15
1 हेपरमप्रभु, न्यायको निम्ति मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। म तपाईंलाई उच्च स्वरमा पुकार्दैछु। अनि मैले भनेका कुरामा म ईमान्दार छु। यसैले मेरो प्रार्थनाप्रति ध्यान दिनुहोस्।
15 मैले न्यायको निम्ति प्रार्थना गरें। यसैले, हे परमप्रभु, म तपाईंको मुहार हेर्नेछु। हे परमप्रभु, तपाईंलाई हेरेर, म पूर्ण सन्तुष्ट हुनेछु।
3. होशे 13:4(म), 9, 14 (तिर 2nd :)
4 मिश्रदेशमा जब तिमीहरू थियौ, त्यहि समयदेखि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। म बाहेक तिमीहरूले अन्य कुनै परमेश्वरलाई चिन्दैनौ। त्यो म नै हुँ जसले तिमीहरूलाई बचायो।
9 हे इस्राएल, मैले तिम्रो रक्षा गरें तर तिमीले मेरो विरोध गर्यौ। यसकारण म तिमीलाई नष्ट गर्नेछु।
14 के म उनीहरूलाई पातालको शक्तिदेखि बचाऊँ? के म उनीहरूलाई मृत्यु देखि मुक्त गराऊँ? हे मृत्यु! तेरो विध्वंशक प्रकोप कहाँ छ? हे चिहान तेरो शक्ति कहाँ छ? मेरो आखाँबाट अब दया लुकेकोछ।
4. लूक4: 1 (तिर 1st ,)
1 येशू यर्दन नदीदेखि र्फकिनुभयो। उहाँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुन्थो।
5. लूक 8 : 40-42 (तिर 1st.), 49-56 (तिर :)
40 येशू गालील र्फकनुभयो, मानिसहरूले उहाँलाई स्वागत गरे। सबैले उहाँका निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।
49 जब येशू बात गरिरहनु भएको थियो, एकजना सभा-घरका अगुवा घरबाट आए र भने, तिम्री छोरी मरिसकेकी छे। अब गुरूलाई कष्ट नदेऊ।
50 जब येशूले यो कूरा सुन्नु भयो। उहाँले याइरसलाई भन्नु भयो, नडराऊ केवल विश्वास गर अनि तिम्रो छोरी निको भई हाल्नेछे।
52 सबै मानिसहरू त्यो केटी मरेकोमा रूँदै शोक गरिरहेका थिए। तर येशूले भन्नुभयो, नरोऊ त्यो मरेकी छैन, उ सुतिरहेकी छे।
54 तर येशूले त्यो केटीको हात समात्नु भयो अनि भन्नुभयो, सानो छोरी, उठ!
55 त्यसको प्राण फर्केर आयो, अनि त्यो जुरुक्क उठी। येशूलेभन्नु भयो, यसलाई केही खान देऊ।
6. लूक 17 : 20, 21
20 कोही फरिसीहरूले येशूलाई सोधे, “परमेश्वरको राज्य कहिले आउनेछ?”येशूले भन्नुभयो, “परमेश्वरको राज्य आउँदैछ तर त्यसरि आउँदैन जुन तिम्रो आँखाले देख्न सक्छौ।
21 मानिसहरूले भन्ने छन्, हेर परमेश्वरको राज्य यहाँ छ! अथवा, त्यहाँ छ! होइन, परमेश्वरको राज्य तिमीभित्रै छ।
7. रोमी6: 16-18, 22, 23
8. 1 पत्रुस 1 : 3-6 (तिर 1st ,), 7-9, 13-16
16 यो धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, पवित्र बन, किनभने म पवित्र छु।
9.2कोरिन्थी 5: 1, 4-10 (तिर ;)
4 जतिञ्जेल हामी यस शरीष्ठ्वरमा बस्छौं, हामी चिन्तारग्रस्त छौं, र गन्गनाउँछौं। मेरो भनाईको अर्थ यो होइन कि हामी यस घरलाई छोडन चाहन्छौं तर हामी हाम्रो स्वर्गीय घरमा जान चाहन्छौं अनि जब यो शरीरको अन्त हुन्छ यो जीवनले ढाकिने छ।
5 परमेश्वरले हामीलाई यसैको लागि सृष्टि गर्नु भएको छ। अनि उहाँले वाचा स्वरूप हामीलाई आत्मा दिनु भएको छ ताकि उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन दिनु हुनेछ।
9 हाम्रो उद्देश्य परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। यस शरीष्ठ्वरमा रहौं अथवा प्रभुसित रहौं हामी उहाँलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्छौं।
10 न्यायको निम्ति हामी सबै परमेश्वरको अघि उभिनै पर्छ। प्रत्येकले यस पार्थिव शरीरमा हुदाँ जे गरेको छ, उसले त्यो पाउनै पर्छ राम्रो अथवा नराम्रो पाउने नै छ।﻿
परमेश्वर मानव सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, र, मानिसका ईश्वरीय सिद्धान्त सिद्ध रहिरहेमा, ईश्वरीय विचार वा परावर्तन, मानिस, सिद्ध छ। मानिस परमेश्वरको अस्तित्वको अभिव्यक्ति हो।
स्वर्ग, सद्भाव, र ईश्वरीय विज्ञानमा ख्रीष्टको एक मात्र मार्गले हामीलाई यस तरिका देखाउँदछ। यो कुनै अन्य वास्तविकतालाई जान्नु हो - जीवनको कुनै चेतना छैन - राम्रो भन्दा राम्रो, परमेश्वर र उहाँको प्रतिबिम्ब, र तथाकथित दु: ख र इन्द्रियको सुख भन्दा माथि उक्लनु।
भावना र शुद्धिकरणको प्रगतिको प्रमाण हो। "धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।"
जबसम्म मानिसमा सद्भाव र अमरत्व स्पष्ट हुँदै जान्छ, हामी परमेश्वरको वास्तविक विचार प्राप्त गर्दैनौं; र शरीरले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछ, यो सत्य हो वा त्रुटि, समझ वा विश्वास, आत्मा वा कुरा। त्यसकारण "अब उहाँसँग आफूलाई परिचित हुनुहोस्, र शान्त हुनुहोस्।" सतर्क रहनुहोस्, सावधान र जागा रहनुहोस्। बाटो सीधा र साँघुरो छ, जसले परमेश्वर एक मात्र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न निम्त्याउँछ। यो शरीर संग एक युद्ध हो, जहाँ हामी पाप, बिमारी र मृत्यु, यहाँ या पछाडि पछाडि विजय गर्न पर्छ - पक्कै पनि हामी आत्मा, वा भगवान मा जीवन को लक्ष्य हासिल गर्न अघि।
4. 291 : 12-18, 23-25 (तिर 1st .), 28-31
विश्‍वव्यापी उद्धार प्रगति र प्रोबेशनमा टुक्रिएको छ, र तिनीहरू बिना अप्राकृतिक छ। स्वर्ग कुनै स्थान होइन, तर दिमागको ईश्वरीय अवस्था हो जसमा दिमागका सबै अभिव्यक्तहरू सामंजस्यपूर्ण र अमर हुन्छन् किनकि पाप त्यहाँ हुँदैन र मानिस आफैले धार्मिकता पाएको पाउँदैन, तर "प्रभुको दिमाग" को अधिकारमा छ।" जस्तो धर्मशास्त्र भन्छ।
जसरी मृत्युले मानिसलाई भेट्टाउँछ, ऊ पनि मृत्यु पछाडि हुनेछ, जबसम्म परीक्षण र बृद्धिले आवश्यक परिवर्तनलाई प्रभाव पार्दैन।
कुनै अन्तिम न्याय मानिसहरु को लागि पर्खिरहेको छैन, किनकि बुद्धिको न्यायको दिन घण्टा र निरन्तर आउँछ, यहाँ सम्म कि न्याय सहित मानिस मानिस सबै भौतिक त्रुटि बाट अलग गरीएको छ।
मृत्यु जस्तो देखिन्थ्यो तर येशूको अपरिवर्तनीय शारीरिक अवस्थापछि सबै भौतिक अवस्थाभन्दा माथि उहाँको उच्चाटन भयो; र यो उदासीनताले उनको स्वर्गारोहणको वर्णन गर्‍यो, र चिहानभन्दा अघि एक प्रोबेशनरी र प्रगतिशील राज्य प्रकट गर्‍यो।
यदि मृत्यु भन्ने परिवर्तनले पाप, बिमारी र मृत्युमाथिको विश्वासलाई नष्ट गर्‍यो भने, विघटनको क्षणमा खुशी जित्नेछ, र सदाको लागि स्थायी रहनेछ; तर यो त्यस्तो होइन। पूर्णता मात्र पूर्णताले प्राप्त गर्दछ। अधर्मीहरू अझै पनि अधर्मी हुनेछन्, जबसम्म ईश्वरीय विज्ञान ख्रीष्टमा सत्य, सबै अज्ञानता र पाप हटाउँदैन।
पाप र त्रुटि जुन मृत्युको क्षणमा हामीलाई प्राप्त गर्दछ त्यो क्षणमा रोकिदैन, तर यी त्रुटिहरूको मृत्यु नभएसम्म स्थिर रहन्छ। पूर्ण आध्यात्मिक हुनको लागि, मानिस पापरहित हुनुपर्छ, र उहाँ सिद्धतामा पुग्दा मात्र यस्तो हुन्छ। हत्याराले ऐनमा मारिएको भए पनि पापलाई त्याग्दैन। ऊ आफ्नो शरीरको मृत्यु भयो भन्ने कुरा विश्वास गर्न र उहाँ क्रूर दिमाग मरेन भनेर जान्नको निम्ति अब आध्यात्मिक हुनुहुन्न। खराबले असललाई हातहतियार नबारेसम्म उसको विचारहरू शुद्ध हुँदैनन्। उसको शरीर उसको दिमाग जत्तिकै भौतिक हो, र यसको विपरित।
पापको बीचमा खुशी साँचो हुन सक्छ, शरीरको तथाकथित मृत्युले पापबाट मुक्ति पाउँछ, र भगवानलाई क्षमा दिनु मात्र पापको विनाश हो भन्ने धारणा रहेको छ - ती गम्भीर गल्तीहरू हुन्। । हामी जान्दछौं कि "आँखा झिम्के जत्तिकै" सबै परिवर्तन हुनेछन्, जब अन्तिम ट्रम्प बज्नेछ; तर बुद्धिको यो अन्तिम आह्वान ईश्वरको चरित्रको अभिव्यक्तिमा क्रिसमसको चरित्रको बृद्धिमा पत्राचार गर्न नसक्नेसम्म आउँदैन। मृत्युसम्बन्धी अनुभवहरूमा विश्वासले उनीहरूलाई महिमाको लागि जगाउने कुरालाई मोर्टलहरूले कल्पना गर्नु आवश्यक छैन।
केहि समय मा प्रत्येक नश्वर, यहाँ वा पछाडि, भगवान संग एक शक्ति मा नश्वर विश्वास संग पक्रनु पर्छ र यसलाई हटाउनु पर्छ।
मृत्युको अस्तित्वको अर्को विमानमा यसैको रूपमा हुन्छ, जीवनको आध्यात्मिक समझ नभएसम्म
हामीलाई कुनै पनि अधिकार छैन कि जीवन अहिले कुरा मा निर्भर गर्दछ, तर मृत्यु पछि यो निर्भर गर्दैन। हामी यहाँ जीवनको विज्ञानको अज्ञानतामा आफ्नो दिनहरू खर्च गर्न सक्दैनौं, र चिहानभन्दा पछाडि यो अज्ञानताको लागि पुरस्कार पाउने आशा गर्न सक्छौं। अज्ञानको बदलाको रूपमा मृत्युले हामीलाई सामञ्जस्य र अमर बनाउँदैन। यदि यहाँ हामीले क्रिश्चियन विज्ञानलाई ध्यान दिएनौं जुन आत्मिक र अनन्त छ भने, हामी यसपछिको आध्यात्मिक जीवनको लागि तयार हुनेछैनौं।
"यो अनन्त जीवन हो", येशू भन्नुहुन्छ - हो, हुँदैन। र त्यसपछि उसले अनन्त जीवनलाई उसको पिता र आफैंको वर्तमान ज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्दछ - प्रेम, सत्य र जीवनको ज्ञान।
मृत्युको सपना यहाँ माईन्डले पछाडि मास्ट गर्नै पर्छ। सत्यको तुरही बोल्ने यो वचनलाई समेट्न "म मरे छु" भन्ने सोच्नको आफ्नै भौतिक घोषणाबाट सोच्नेछ, "त्यहाँ मृत्यु, कुनै निष्क्रियता, रोगग्रस्त कार्य, अवरोध र प्रतिक्रिया छैन।"
जीवन वास्तविक हो, र मृत्यु भ्रम हो। येशूका मार्गमा आत्माका तथ्यहरूको प्रदर्शनले भौतिक भावनाको कालो दर्शनहरू सद्भाव र अमरत्वमा समाधान गर्दछ। यस सर्वोच्च क्षणमा मानवको सुअवसर हाम्रो गुरुका शब्दहरू प्रमाणित गर्नु हो: "यदि कसैले मेरो वचन पालन गर्छ भने उसले कहिल्यै मृत्यु देख्दैन।" झूटा ट्रस्टहरू र भौतिक प्रमाणहरूको बारेमा सोच्नको लागि कि अस्तित्वको आध्यात्मिक तथ्यहरू देखा पर्न सक्छन् - यो महान प्राप्ति हो जुन हामी झूटालाई हटाउनेछौं र सत्यलाई स्थान दिनेछौं। यसैले हामी सत्यमा मन्दिर वा शरीर स्थापना गर्न सक्दछौं, "जसको निर्माणकर्ता र निर्माता परमेश्वर हुनुहुन्छ।"
जब यहाँ वा पछि पदार्थको जीवनको विश्वास विलुप्त हुन्छ, विश्वासले राखेको त्रुटि विश्वाससँग विघटन हुन्छ, र कहिल्यै पुरानो अवस्थामा फर्किदैन।
प्रगति अनुभवको जन्म भएको छ। यो नश्वर मानिस पाकेको हुन्छ, जुन मार्फत अमरको लागि नश्वर ड्रप गरिन्छ। या त यहाँ वा पछाडि, पीडित वा विज्ञानले जीवन र दिमागको बारेमा सबै भ्रमहरू नष्ट गर्नुपर्दछ, र भौतिक भावना र आत्मलाई पुन: उत्पन्न गर्नुपर्दछ। आफ्नो कामको साथ बूढा मानिस छोडिनु पर्छ। कामुक वा पापी कुनै पनि कुरा अमर छैन। एक गलत भौतिक भावना र पापको मृत्यु, जैविक पदार्थको मृत्यु होइन, जुन कुरा मानिस र जीवन, सामंजस्यपूर्ण, वास्तविक र अनन्त प्रकट गर्दछ।
यसरी प्रगतिले अन्तत: सबै त्रुटिहरूलाई नष्ट गर्दछ, र प्रकाशमा अमरत्व ल्याउँछ।